Kutheni Train Ride yindlela Best Ukuze Bona Italy | Gcina A Isitimela
ekhaya > Uloliwe kuhambo Italy > Kutheni Train Ride yindlela Best Ukuze Bona Italy
Wena bathwele leenketho xa ugqibe indlela yokuya. Kanye igama movie odumileyo, ungakwazi ukuya nge ezithwala, oololiwe, neminyobo. Xa kuziwa bathathe uhambo of Italy, kunjalo – kukho ezinye kwimboni eziqondile sidlula ukukhwela uloliwe.
QEQESHA KUPHALISA WENTUTHUZELO
kid udla ukhwele uloliwe
izihlalo beenqwelo ababedume omfutshane umlenze igumbi, kwaye abavumelekanga ukuba basebenzise izixhobo zombane ngexesha isuka kunye kokwehla. Oku kuthetha ukuba moya elifutshane, na uhleli kwisitulo sezigulana isihlalo sakho encinane uninzi ukubhabha ngaphandle kweziphazamiso ezinikezelwa Smartphones yaye ubuchwepheshe, this is really different from a train ride.
Cars badla ukunika isithuba kancinci, kodwa hambo kunokuba nzima yaye abanye abantu sigula emotweni – ngakumbi uhambo olude xa ungafuna ukufunda okanye badlale imidlalo. train ride, kwelinye icala, inikeza izihlalo ezitofotofo kunye ukhwele agudileyo – liqhawuke ngu isuka elide kunye namaxesha indiza, kwakhona indlela eyahlukileyo from a train ride.
Xa sihamba ukhwele e-Italy uloliwe, ungazama i kakhulu izihlalo ezitofotofo ergonomic kunye ezingontsini isandi-bayibonile i entsha isantya esiphezulu Frecciarossa 1000 uloliwe.
Naples ku Genoa Uqeqesha
ETurin ku Genoa Uqeqesha
Rimini ku Genoa Uqeqesha
Siena ku Genoa Uqeqesha
QEQESHA KUPHALISA VIEWS
umdla Air inika zitsala umdla emoyeni, kodwa nje ixesha elifutshane de-moya kwenyuka kude ngaphezu emaphandleni. Nangona evele abadli ngokuba sithi ndijonge, iindlela phakathi imizi inganikeza imibono gorgeous. kunjalo, umqhubi kufuneka ingqalelo endleleni, kunjalo nje ezinye abakhweli nga ukumangaliswa iinduli ngokuthimba okanye ocean elihle. Ukuqeqesha ukhwele ivumela zonke abahambi ukonwabela ubuhle bendalo ngaphandle windows.
Enye yezinto usiva ezivela kubantu waya Italy ngololiwe yindlela gorgeous ngayo uhambo ngololiwe ngexesha kwelanga.
uhambo Ukuqeqesha Italy mihle ngakumbi so make sure you travel along the Cinque Terra between Levanto and La Spezia, okanye uthathe uhambo phantsi kunxweme olusempuma ukusuka Rimini ukuya Catania.
Messina ku Palermo Uqeqesha
ESirakusa ku Palermo Uqeqesha
YeSisili ku Palermo Uqeqesha
Catania ku Palermo Uqeqesha
umdla Ukuqeqesha ride yi kakhulu ezingabizi kakhulu kunokuba kokundiza. Car irente kuba iindleko, kodwa xa ukwengeza inshorensi, igesi kunye nexesha (kakhulu ixesha lokuqhuba kuthetha okungakumbi nobusuku zokuhlala) uhambo lwakho Ungafumana eninzi fast. Unakho ukuthatha uloliwe ukhwele ubusuku, ngaloo ndlela uhlawulele yokuhlala kunye nezothutho kwenye.
ERoma ukuze Levanto Uqeqesha
Rimini ku La Spezia Uqeqesha
La Spezia ku Levanto Uqeqesha
ixesha kwelanga phezu kweentaba
Oololiwe umsindo ezimbalwa kakhulu carbon than planes or cars. Ngokutsho isifundo, iimoto zikhupha kabini i ubungakanani be-CO2 than trains do.
Moya ukuba kakhulu kwimvelo. Xa ukhetha phakathi eziphaphazelayo okanye uloliwe, ingqalelo lo: moya sebenzisa uninzi amafutha zabo ukusuka kunye kokwehla. Nangona oku evens phezu ubude moya ezihamba imigama, oko kuthetha amafutha okuninzi ngekhilomitha nganye isetyenziswa moya elifutshane, ezifana uhambo Italy.
Ngaphezu koko, Abantu abaninzi baye kwisikhululo ngemoto okanye itekisi, ukudibanisa ukukhutshwa carbon ngakumbi inani labo. Oku kuthetha ukuba iyavakala ngakumbi esingqongileyo ukuze bathathe ukukhwela ngaphezu moya elifutshane okanye drive amabanga uloliwe.
Ngaphandle ipetroli nedizili nokusetyenziswa, kukho nengxolo kwaye ukumoshwa komoya, kwakunye nemfuneko iimoto yokupaka kwizixeko sele abanalo izithuba eluhlaza.
QEQESHA KUPHALISA NGOKUKHUSELEKILEYO
Xa umlinganiselo kwelabantu ngamnye abakhweli-imayili, flying ikhuseleke kakhulu kunokuba yokuqhuba. Apha kungani: kukho ithuba ngaphantsi yimpazamo eyenziwa ngumntu, kwaye kunzima kakhulu ngakumbi ukuba i pilot kunokuba ukufumana umqhubi welayisensi. Thatha kwi iimeko zendlela akhawunti nokukhathala kwi elide ngemoto, kulula ukubona isizathu sokuba ukhetha moya ekhuselekileyo ngaphezu kokuba imoto.
Xa kuthelekiswa oololiwe, kunjalo, moya azikho kakhulu ngendlela ekhuselekileyo. Oololiwe bahamba kwingoma ngesantya esisezantsi, elithetha kukho ithuba kangako ungabonakali kuthelekiswa moya. Kwimeko derailment, i ngesantya esisezantsi mean umngcipheko ngaphantsi.
UFlorence Rimini Uqeqesha
ERoma ukuze Rimini Uqeqesha
EMilan ukuya Rimini Uqeqesha
EVenice ku Rimini Uqeqesha
Umndilili akahambi lane enambuzelayo 2,500 abantu ngeyure – ngexesha umgca uloliwe eqhelekileyo kungaba 50,000 abantu ngeyure. Oku kwenza umdla Uloliwe ukhwele kakhulu ngokukhawuleza kunokuba uqhuba, ingakumbi xa kuxhomekeke kade-ihamba traffic, ukuyeka izitrato, iirobhoti Akubuya engaphephekiyo ephosakeleyo. Ngaphezu koko, umqhubi kufuneka ingqalelo endleleni, ngoko baza kukwazi ukufunda, isifundo, ukulala okanye umsebenzi.
Flying imigama ezinde ngokukhawuleza kunokuba ehamba ngololiwe, kodwa imigama emifutshane, uhambo ngomoya akuthethi ukulondoloza ixesha. Ekuqaleni, kufuneka ufumane ukuya kwisikhululo – ngokufuthi imi kude kwiindawo zokuhlala. Kananjalo kufuneka ukuba ube khona kangangeyure ubuncinane phambi kwexesha lakho uhambo ukukhangela kungena nge zokhuseleko. Ukuba u hlola imithwalo, kuza kufuneka ukuba silinde kuwo okuvezwa. Kwaye yiloo nto zonke phambi kokuba nakuphi na ukulibaziseka moya okanye ukuhamba okanye ibhasi phakathi zoku moya namasango.
Genoa eVenice Uqeqesha
ETurin eVenice Uqeqesha
Parma eVenice Uqeqesha
La Spezia eVenice Uqeqesha
ilanga isikhululo sikaloliwe
Airports zidla emi ngaphandle komzi, intsingiselo xa ufike, uya kusafuneka athathe imoto, ibhasi okanye uloliwe kulo mzi. Xa kufikwa ebona izinto, iindlela kumaziko isixeko zikwazi lexinene kwaye kunzima ukufikelela ngenqwelo-mafutha, ngoko ukuthatha uloliwe yenza kakhulu ingqiqo kwiindawo zenqila.
Ukujonga ukuba bathenge amatikiti ukukhwela uloliwe kungekho ntlawulo nokubhukisha? Visit SaveATrain.com to Ukufikelela reyithi zibiza uloliwe.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/why-a-train-ride-is-the-best-way-to-see-italy/ - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
Indawo intle longtrainjourneys train Travel travelitaly
Ziziphi I-Train Routes odume And Historical
Qeqesha uhambo eFrance, Uloliwe kuhambo Italy, Qeqesha uKhenketho e-UK, Travel Europe